Taksiga mustaqbalka waa qeyb kamid ah hada (iyo IV): Uber | Wararka IPhone
Taksiga mustaqbalka waa qeyb ka mid ah xilligan (iyo IV): Uber
Lagu qiimeeyo in ka badan 60.000 milyan oo euro, cidina shaki yar ugama jiro cidda masuulka ka ah adduunka socodka 2.0. Uber waa talaabo ka saraysa inta hartay iyada oo ay ugu wacan tahay siyaasad fidin xoog leh, daacadnimada adeegsadayaasheeda iyo khibrada isticmaale ee ay bixinaysay tan iyo markii la bilaabay. Waa waqtigii la falanqeyn lahaa boqorka.
1 Uber ayaa xukuntay halkan
2 Uber gudaha Isbaanish
3 Tijaabinta Uber
Uber ayaa xukuntay halkan
Kadib dib u habeyn dhowaan lagu sameeyay barnaamijka, hadda Uber waa fudud oo dhakhso badan in loo isticmaalo sidii hore. Codsashada safar waa arrin dhowr ilbiriqsiyo ah, maadaama ay waqti badan geliyeen sameynta hawsha sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan si aan looga lumin waqti ka badan kan lama huraanka ah.
Dabcan, dhammaan faa'iidooyinka had iyo jeer lagu garto Uber waa la hayaa, sida u qaybinta saddex nooc oo astaamo ah (shaqsiyeed, qoys iyo ganacsi), suurtagalnimada in sicirkeenna lala wadaago isla safarada ama adeegyada kala duwan ee ay ku jiraan Ikhtiyaariyada kala duwan sida gawaarida korontada, gawaarida waaweyn, gawaarida raaxada, adeegga gudbinta cuntada ama xitaa suurtagalnimada dirista iyo helitaanka xirmooyinka.
Waxaas oo dhan waxaa u dheer, lama iska indha tiri karo inay tahay hogaamiyaha aan muran ka taagnayn ee qaybta, sidoo kale waa shirkadda leh baabuurta ugu badan sidaa darteedna midka inaga dhigi doona kan ugu yar inaad safar gasho inta badan kiisaska. Dabcan, iska ilaali kuwa caanka ah sicir barar haddii aan adeegsaneyno adeegga waqtiga ugu sarreeya ama munaasabadaha.
Uber gudaha Isbaanish
Xaaladda Uber ee Spain hadda waxaa la oran karaa waa mid dhexdhexaad ah oo wanaagsan oo rajo wanaagsan. Ka dib bilow rajo fiican leh, laga bilaabo adduunka tagaasida dhammaan hilibka waxaa la saaray guntinta si loo tijaabiyo xannibi Uber iyada oo loo marayo dhammaan dariiqyada sharciga ah ee suurtagalka ah, ugu dambeyntiina shirkadda looga joojiyo inay shaqeyso.
Mudo markii uu maqnaa, Uber waxay ku noqotay Madrid wax yar ka hor sanad ka hor oo qaabkii uu adeegsaday Cabify, taasi waa, darawallada haysta liisanka VTC, oo si fiican u sharci ah. Mararka qaar tiro badan oo gawaari ah ayaa la la'yahay, laakiin liisanka ayaa xadidaya fursadaha aad u tiro badan taasna waa in si cad loo xuso. Xitaa iyadoo sidaas ah, sida caadiga ah, sugitaanka baabuurku waa gaaban yahay waana macquul.
Qorshayaasha shirkadda uu hoggaamiyo Travis Kalanick waxay marayaan soo degitaan magaalooyin badan oo Spain ah, labada musharax ee soo socota ee weyn waa Valencia iyo Barcelona.
Haddii aadan waligaa isticmaalin Uber oo laga heli karo magaaladaada hadda, waad soo dejisan kartaa barnaamijka oo waad heli kartaa safar hadiyad ah (Way ku kala duwan tahay tiro ahaan marka loo eego xilliyada). Haddii kale waxaad sameyn kartaa a bilaash diiwaangelinta deynta haddii aad rabto xiriiriyahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Taksiga mustaqbalka waa qeyb ka mid ah xilligan (iyo IV): Uber
Waxaan rajeynayaa in Uber hadda loo isticmaali karo si guud Spain oo dhan, waxaan soo maray Koonfurta Ameerika waana farxad inaan ku isticmaalo halkaas oo aan ku badbaadiyo lacag fiican adoo ka fogaanaya tagaasida ama xitaa gaadiidka qaaliga ah ee qaaska ah. Shaki la'aan waxaan u maleynayaa inay kafiican tahay Cabify laakiin wixii aan idhi, ha ku sii socoto sidii ay ahayd Spain oo dhan.
ING waxay timid Australia iyadoo la socota Apple Pay.Ma u baahan tahay wax ka yar Spain?
CCWallCustomizer wuxuu noo ogolaanayaa inaan bedelno asalka Xarunta Xakamaynta